आजको सेयर बजारमा निफ्राको सबैभन्दा बढी कारोबार, सेयर मूल्य कति ? | Ratopati
सोमबार सेयर बजार बढेको छ । सोमबार नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा)को सेयर सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । यस आधारमा रकमको आधारमा कारोबार हुनेको अग्रस्थानमा निफ्रा देखिएको छ । निफ्राको ४४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । यसको सेयर मूल्य ५२९ रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत बुधबार प्राविधिक समस्याका कारण निफ्राको सेयर भ्यालु सिस्टममा शुन्य देखिएको थियो । तर पछि नेप्सेले सो त्रुटि सच्याएको थियो । त्यस यता निफ्राको सेयर मूल्य उकालो लाग्न सकेको छैन । रकमका आधारमा दोस्रो बढी कारोबार हुनेमा आज शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ ।
रुरु को आइपिओ खुल्यो, कतिले पाउनेछन् ?
चन्द्रागिरीको सेयर मूल्य २५ सय नाघ्यो
मध्य भोटेकोशीले आइपिओ ल्याउन अनुमति पायो